गाउँभरिका बच्चा सेक्ने रामकुमारी काकी – Nepal Press
गाउँभरिका बच्चा सेक्ने रामकुमारी काकी
२०७७ चैत ६ गते ७:४०
रामकुमारी काकीले अक्षर छिचोलेकी छैनन् । ‘नाही, कुछ नइ जन्ठु एक अक्षर,’ उनी लजाउँदै भन्छिन् । तर, आफ्नो सीपमा उनको राम्रो पकड छ । जसलाई २० वर्षदेखि कायम राख्दै आएकी छन् । ‘कोइलाको रापमा बच्चा र आमा सेकाउँदा उनीहरू स्वस्थ हुन्छन् । यो काममा मलाई रमाइलो लाग्छ,’ थारु भाषामै उनी भन्छिन् ।
यतिका वर्षदेखि उनले कति बच्चाहरू सेकी होलान् त ? यकिन छैन रामकुमारीलाई । भन्छिन्, ‘बहुट हुइगिल् । लर्का बरे बरे हुरख्लाँ ।’
थारु समुदायमा भने बच्चा सेकेबापत् उनी पैसा लिँदिनन् । त्यहाँ सुप्पामा चामल दिने चलन छ । ‘हमार थारुन्मे पैसा नइदेथाँ। चाउर देथाँ,’ उनी सुनाउँछिन् ।
यो पेसामा संयोगले लागेकी हुन् रामकुमारी । तिलकपुरमा बाख्रा चराउँदै बितेको थियो बाल्यकाल । विवाहपछि ‘ससुराल’ कोहलपुर आएकी उनी त्यता पनि खेती किसानी नै गर्थिन् । आफ्नो बच्चा जन्मँदा आफूलाई र बच्चा सेक्ने कोही थिएनन् । ‘मे त अपने अकेली रहनु, अकेली कैनु,’ उनी सुनाउँछिन् ।
पहिलो बच्चा सेक्दा त्यति ज्ञान पनि थिएन रामकुमारीलाई । १० दिन सुत्केरी आराम गरेपछि ११ दिनको दिनबाट काममा जानुपर्थ्यो । उनी सम्झिन्छिन्, ‘मै टे अकेली रहुँ, सक्कुचिज अप्नेही कैलु १० दिनतक हम्रे काम नइ कर्थी। १० दिन पाछे सक्कु काम कर्थी।’
राम्रोसँग स्याहार पाउने अवस्था थिएन, त्यसरी सेक्न पनि कहाँ पाइन् र ! त्यतिबेला उनलाई यो काम गर्छु भन्ने रत्तिभर थिएन ।
एकदिन गाउँका प्रधानले उनलाई एउटा तालिममा जान पठाए । के तालिम थाहा थिएन । अहिले पनि थाहा छैन त्यो तालिम कुन संस्थाले दियो ?
‘२ वटा पुरुष र ३ जना महिलाले सिकाएका थिए । काठमाडौ पनि लगेका थिए,’ आफ्नै भाषामा भन्छिन् ।
त्यतिबेला काठमाडौंमा पहिलो पटक पुगिन् उनी । उनीसँगै ३ जना गएका थिए । उनलाई अनौठो लाग्यो काठमाडौं । निःशुल्क काठमाडौं घुम्दा, नयाँ कुरा सिक्दा, दिनको हजारका दरले पैसा पाउँदा उनमा खुसीको सीमा थिएन ।
काठमाडौंमा सुत्केरी महिला र बच्चा सेक्नेबारे तालिम दिइरहँदा उनले चित्र बुझ्थिन्, अक्षर बुझ्दिन थिइन् ।
त्यहाँबाट सिकेर आएपछि उनले आफ्नै गाउँबाट सुरु गरिन् काम । विस्तारै बानी पर्दै गयो, अनि रमाइलो मान्दै गर्न थालिन् ।
यतिका वर्ष भयो यो काम गरेको । कामबाट उनले अलिकति गर–गहना जोडिन् । सन्तानहरूको लागि घर खर्च टारिन् । र अलिअलि जुगाड पनि गरिन् ।
उनलाई कमाइ हुनुमा मात्र खुसी छैन, लाग्दैन पनि । खुसी त त्यसमा छ, जब कसैले आफ्नो घरमा नयाँ शिशु जन्मनेबित्तिकै सम्झन्छन्- रामकुमारी काकी !
प्रकाशित: २०७७ चैत ६ गते ७:४०
सोती हत्याकाण्ड: आक्रोशित ‘नवराजका आमाहरु’ र अर्थमन्त्रीको आश्वासन